Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Mark 2
Nepali New Revised Version, Mark 2
1 केही दिनपछि उहाँ कफर्नहुम फर्कनुभयो, अनि मानिसहरूले उहाँ घरमा हुनुहुन्‍छ भन्‍ने सुने।
2 अनि यति धेरै मानिसहरू जम्‍मा भए कि तिनीहरू त्‍यहाँ अटाएनन्‌, यहाँसम्‍म कि ढोकाको बाहिर पनि ठाउँ भएन, र उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्‍वरको वचन प्रचार गर्दैहुनुहुन्‍थ्‍यो।
3 अनि चार जनाले बोकेको एक जना पक्षाघातीलाई लिएर मानिसहरू उहाँकहाँ आए।
4 भीड़को कारणले येशूको नजिक त्‍यस मानिसलाई पुर्‍याउन नसक्‍दा तिनीहरूले उहाँ हुनुभएको ठाउँको माथिको छाना खोले, र उघारिएको ठाउँबाट पक्षाघातीलाई त्‍यो सुतेको खाटसमेत तल ओह्रालिदिए।
5 येशूले तिनीहरूको विश्‍वास देखेर त्‍यस पक्षाघातीलाई भन्‍नुभयो,  “ए छोरा, तिम्रा पापहरू क्षमा भए।”
6 तर त्‍यहाँ केही शास्‍त्रीहरू बसिरहेका थिए, र आफ्‍ना मनमा यसो भनेर विचार गरिरहेका थिए,
7 “यस मानिसले किन यसरी बोल्‍दछ? यो त ईश्‍वर-निन्‍दा हो। केवल एक, अर्थात्‌ परमेश्‍वरले बाहेक अरू कसले पाप क्षमा गर्न सक्‍छ?”
8 अनि तिनीहरू आपसमा यसरी विचार गर्दैछन्‌ भन्‍ने येशूले तुरुन्‍तै आफ्‍नो आत्‍मामा थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो,  “किन तिमीहरू आफ्‍ना मनमा यस्‍तो विचार गर्दैछौ?
9  पक्षाघातीलाई ‘तिम्रा पापहरू क्षमा भए’ भन्‍नु, कि ‘उठ, तिम्रो खाट उठाएर हिँड़’ भन्‍नु, कुनचाहिँ सजिलो छ?
10  तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्‍वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भनी तिमीहरूले जान।”  तब उहाँले त्‍यस पक्षाघातीलाई भन्‍नुभयो,
11  “म तिमीलाई भन्‍दछु, उठ, तिम्रो खाट उठाऊ, र घर जाऊ।”
12 त्‍यो उठ्यो, र तुरुन्‍तै खाट उठाएर सबैका सामुन्‍नेबाट गइहाल्‍यो। यहाँसम्‍म कि, सबै जना आश्‍चर्य-चकित भए, र “हामीले यस्‍तो त कहिल्‍यै देखेका छैनौं” भन्‍दै तिनीहरूले परमेश्‍वरको महिमा गरे।
13 उहाँ फेरि एक पल्‍ट समुद्रको किनारमा जानुभयो। अनि मानिसहरूको एउटा ठूलो भीड उहाँकहाँ आयो, र उहाँले तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो।
14 त्‍यसपछि जाँदैगर्दा उहाँले अल्‍फयसका छोरा लेवीलाई कर उठाउनेहरूको ठाउँमा बसिरहेका देख्‍नुभयो र तिनलाई भन्‍नुभयो,  “मेरो पछि लाग।” तिनी उठेर उहाँको पछि लागे।
15 उहाँ लेवीको घरमा भोजन गर्न बस्‍नुहुँदा कर उठाउने धेरै जना र पापीहरू पनि येशू र उहाँका चेलाहरूका साथमा बसिरहेका थिए। किनकि उहाँलाई पछ्याउनेहरू धेरै थिए।
16 उहाँ पापीहरू र कर उठाउनेहरूसँग खाइरहनुभएको देखेर फरिसी दलका शास्‍त्रीहरूले उहाँका चेलाहरूलाई भने, “तिनी किन कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग बसेर खान्‍छन्‌?”
17 यो सुनेर येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो,  “निरोगीहरूलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीहरूलाई मात्र पर्छ। म धर्मीहरूलाई होइन, तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ।”
18 यूहन्‍नाका चेलाहरू र फरिसीहरू उपवास बस्‍तथिए। मानिसहरूले आएर उहाँलाई भने, “यूहन्‍नाका चेलाहरू र फरिसीका चेलाहरू उपवास बस्‍तछन्‌, तर तपाईंका चेलाहरू किन उपवास बस्‍दैनन्‌?”
19 येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो,  “के दुलहा तिनीहरूका साथमा रहुञ्‍जेल जन्‍तीहरू उपवास बस्‍छन्‌ र? जहिलेसम्‍म दुलहा तिनीहरूका साथमा हुन्‍छन्‌ तिनीहरू उपवास बस्‍दैनन्‌।
20  तर समय आउनेछ, जब दुलहा तिनीहरूबाट अलग गराइनेछन्‌, तब तिनीहरू त्‍यस दिन उपवास बस्‍नेछन्‌।
21  “कसैले पुरानो लुगामा नयाँ कपड़ाको टालो हाल्‍दैन, नत्रता टालेको कपड़ा फाटिनिस्‍कन्‍छ, अर्थात्‌ नयाँ पुरानोबाट फाटेर निस्‍कन्‍छ, र फटाइ झन्‌ नराम्रो हुनेछ।
22  अनि कसैले नयाँ दाखमद्य पुरानो छालाको मशकमा हाल्‍दैन, नत्रता त्‍यस दाखमद्यले छालाका मशकहरू फुटाइदिन्‍छ, र दाखमद्य र मशक पनि नष्‍ट हुन्‍छन्‌। तर नयाँ दाखमद्यचाहिँ नयैँ भाँड़ामा हालिन्‍छ।”
23 एक शबाथ-दिन उहाँ अन्‍नका खेतहरूबाट भएर जाँदैहुनुहुन्‍थ्‍यो। त्‍यताबाट जाँदा उहाँका चेलाहरूले हिँड्‌दाहिँड्‌दै अन्‍नका बाला टिप्‍न लागे।
24 यो देखेर फरिसीहरूले उहाँलाई भने, “हेर्नुहोस्‌, शबाथ-दिनमा जे गर्नु अनुचित छ तिनीहरू किन त्‍यही गर्दछन्‌?”
25 उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो,  “जब दाऊद र तिनीसँग हुनेहरू खाँचोमा परेका र भोकाएका थिए तब दाऊदले के गरे? के तिमीहरूले कहिल्‍यै पढ़ेका छैनौ?
26  प्रधान पूजाहारी अबियाथारको पालोमा परमेश्‍वरको भवनमा तिनी पसे, र परमेश्‍वरलाई चढ़ाइएको रोटी खाए, जो पूजाहारीले बाहेक अरूले खान अनुचित छ, र त्‍यो रोटी तिनको साथमा हुनेहरूलाई पनि दिए।”
27 तिनीहरूलाई उहाँले भन्‍नुभयो,  “शबाथ-दिन मानिसको लागि बनेको हो, मानिस शबाथ-दिनको निम्‍ति होइन।
28  यसैकारण मानिसको पुत्र शबाथ-दिनको पनि प्रभु हो।”
Mark 1 Choose Book & Chapter Mark 3